Imigomo yesevisi - Popular Jewelry
Lewebhusayithi isebenza yi Popular Jewelry. Kuwo wonke umhlaba, amagama athi "thina", "thina" nethi "ethu" abhekiselwa kuwo Popular Jewelry. Popular Jewelry unikeza le webhusayithi, kufaka phakathi lonke ulwazi, amathuluzi kanye nezinsizakalo ezitholakala kule sayithi kuwe, umsebenzisi, zilungiswe ukwamukelwa kwazo zonke izimo, izimo, izinqubomgomo kanye nezaziso ezichazwe lapha.
Ngokuvakashela isayithi lethu kanye / noma ukuthenga okuthile kithi, uhlanganyela "kwi-Service" yethu futhi uyavuma ukuboshwa yimigomo nemibandela elandelayo ("Imigomo Yesevisi", "Imigomo"), kufaka phakathi leyo migomo nemibandela nemigomo eyengeziwe Okukhulunywe lapha kanye / noma etholakala yi-hyperlink. Le Migomo Yesevisi isebenza kubo bonke abasebenzisi besayithi, kubandakanya ngaphandle kokunciphisa abasebenzisi abaphequlula, abathengisi, amakhasimende, abathengisi, kanye / noma abanikeli bokuqukethwe.
Sicela ufunde le Migomo Yesevisi ngokucophelela ngaphambi kokufinyelela noma ukusebenzisa iwebhusayithi yethu. Ngokufinyelela noma ukusebenzisa noma iyiphi ingxenye yesayithi, uyavuma ukuthi uboshiwe yiMigomo yesevisi. Uma ungavumelani nayo yonke imigomo nemibandela yalesi sivumelwano, khona-ke ngeke ukwazi ukufinyelela iwebhusayithi noma usebenzise noma yimaphi amasevisi. Uma le Migomo Yensizakalo ibhekwa njengokunikezwa, ukwamukelwa kupheleleke kule Migomo Yesevisi.
Noma yiziphi izici ezintsha noma amathuluzi afakwe kwisitolo samanje nazo ziyohambisana neMigomo Yesevisi. Ungabuyekeza inguqulo yamanje kakhulu yeMigomo Yesevisi noma kunini kuleli khasi. Sigcina ilungelo lokubuyekeza, ukushintsha noma ukufaka noma iyiphi ingxenye yale Migomo Yesevisi ngokuthumela izibuyekezo kanye / noma izinguquko kuwebhusayithi yethu. Kungumthwalo wakho ukuhlola leli khasi ngezikhathi ezithile ukuze ushintshe. Ukusebenzisa kwakho okuqhubekayo noma ukufinyelela kwiwebhusayithi emva kokuthunyelwa kwanoma yikuphi ushintsho kubandakanya ukwamukelwa kwalezo zinguquko.
Isitolo sethu sithathwe ku-Shopify Inc. Basinika isiteji se-intanethi ye-e-commerce esivumela ukuthi sithengise imikhiqizo namasevisi wethu kuwe.
ISIQEPHU 1 - ISIQEPHU SOKUPHAKATHI KWAMAKHAYA
Ngokuvumelana nale Migomo Yesevisi, ubonisa ukuthi okungenani uneminyaka yobudala embusweni wakho noma esifundazweni sokuhlala, noma ukuthi uneminyaka yobudala emphakathini wakho noma esifundazweni sokuhlala futhi usinike imvume yakho Vumela noma yikuphi kulabo abancinci bakho abasebenzisa leli sayithi.
Ungase ungasebenzisi imikhiqizo yethu nganoma iyiphi injongo engekho emthethweni noma engagunyaziwe futhi ungasebenzisa i-Service, ukuphula noma yimiphi imithetho ekugunyazeni kwakho (kufaka phakathi kodwa kungagcini emithethweni ye-copyright).
INGXENYE 2 - IZIMISO EZIKHULU
ISIQEPHU 3 - UKUQALA, UKUPHUMELA NOKUHLOLA ISICELO SOKWAZI
INGXENYE 4 - IZINHLELO ZENKONZO NEZIMALI
ISIGABA 5 - IMITHI NOMA AMASEBENZI (uma kusebenza)
Senze konke okusemandleni ukubonisa ngokunembile ngangokunokwenzeka imibala nezithombe zemikhiqizo yethu ebonakala esitolo. Asikwazi ukuqinisekisa ukuthi ukubukwa komqapha wakho wekhompiyutha kunoma imuphi umbala kuzoba okulungile.
ISIQEPHU 6 - UKUQALA KWENKCAZELO YOKUHLOLA NOKWENZA I-ACCOUNT
Ukuze uthole imininingwane eminingi, sicela ubuyekeze inqubomgomo yethu yokubuyisa.
ISIQEPHU 7 - IZIKHONO ZEMPAKATHI
Singase futhi, ngokuzayo, sinikeze amasevisi amasha kanye / noma izici ngokusebenzisa iwebhusayithi (kubandakanya, ukukhululwa kwamathuluzi amasha nezinsiza). Izici ezintsha kanye / noma amasevisi azophinde agxile kule Migomo Yesevisi.
ISIQEPHU 8 - IZINGXENYE ZESITHATHU
Asikho icala lokulimala noma ukulimala okuhlobene nokuthengwa noma ukusetshenziswa kwezimpahla, izinsizakalo, izinsiza, okuqukethwe, noma ezinye izinkokhelo ezenziwe ngokuphathelene nanoma yiziphi izinkampani zangaphandle. Sicela ubuyekeze ngokucophelela izinqubomgomo nezenzo zomuntu wesithathu futhi uqinisekise ukuthi uyawaqonda ngaphambi kokuba uhlanganyele kunoma yikuphi ukuthengiselana. Izikhalazo, izimangalo, ukukhathazeka, noma imibuzo emayelana nemikhiqizo yangaphandle kumele iqondiswe kumuntu wesithathu.
ISIQEPHU 9 - ISIFUNDO SABASEBENZI, UKUPHILA NEMINYE IMISEBENZI
Uma, ngesicelo sethu, uthumela ukuthumela okuthile okukhethekile (isibonelo ukufakwa komncintiswano) noma ngaphandle kwesicelo esivela kithi uthumela imibono yokudala, iziphakamiso, iziphakamiso, izinhlelo, noma ezinye izinto, kungakhathaliseki ukuthi ku-intanethi, nge-imeyili, ngeposi, noma ngenye indlela (Ngokuhlanganyela, 'ukuphawula'), uyavuma ukuthi, nganoma yisiphi isikhathi, singabinqatshelwe, sihlele, sishicilele, sishicilele, sisakaze, sihumushe futhi sisebenzise nanoma yikuphi ukuxhumana noma yikuphi ukuphawula okushiwo kithi. Singabantu futhi ngeke sibe ngaphansi kwesibopho (1) ukugcina noma yikuphi ukuphawula ngokuqiniseka; (2) ukukhokha isinxephezelo nganoma yikuphi ukuphawula; Noma (3) ukuphendula kunoma yimaphi amazwana.
Singase, kodwa singabi nesibopho sokuthi, sibheke, sihlele noma sisuse okuqukethwe esikutholayo ngokuqonda kwethu okungekho emthethweni, okuthukuthelisayo, okusongelayo, okuphazamisayo, okuhlambalaza, okuyizithombe zobulili ezingcolile, okuhlambalazayo noma okungafaneleki noma okwephula impahla yomuntu noma yile Migomo Yesevisi .
ISIGABA 10 - ULWAZI OLUNYE
Ukuhambisa kwakho kolwazi lomuntu siqu esitolo kulawulwa inqubomgomo yethu yobumfihlo. Ukuze ubuke inqubomgomo yethu yobumfihlo.
ISIQEPHU 11 - IZINDLELA, AMAKHAYA NEMISEBENZI
ISIQEPHU 12 - UKUSEBENZISWA OKUSEBENZISWA
Ngaphandle kwezinye izinqatshelwe njengoba kuvezwe eMigomo Yesevisi, awuvunyelwe ukusebenzisa isayithi noma okuqukethwe kwayo: (a) nganoma iyiphi inhloso engekho emthethweni; (B) ukucela abanye ukuba benze noma bahlanganyele kunoma yiziphi izenzo ezingekho emthethweni; (C) ukwephula noma yimiphi imithethonqubo yomhlaba wonke, wesifundazwe, yesifundazwe noma yesifundazwe, imithetho, imithetho, noma imithetho yasendaweni; (D) ukwephulwa noma ukwephulwa kwamalungelo ethu empahla yengqondo noma amalungelo omnikazi wezingqondo zabanye; (E) ukuhlukunyezwa, ukuhlukunyezwa, ukuhlambalaza, ukulimaza, ukuhlambalaza, ukunyundela, ukuphazamisa, ukusongela noma ukubandlulula ngokusekelwe ubulili, ukuziphatha ngokocansi, inkolo, ubuhlanga, ubuhlanga, ubudala, isizwe noma ukukhubazeka; (F) ukuhambisa ulwazi olungamanga noma oludukisayo; (G) ukulayisha noma ukudlulisa amagciwane noma yiluphi olunye uhlobo lwekhodi enonya elizosetshenziswa noma lusetshenziswe nganoma iyiphi indlela eyophazamisa ukusebenza noma ukusebenza kweNsizakalo noma nanoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene, amanye amawebhusayithi, noma i-Intanethi; (H) ukuqoqa noma ukulandelela imininingwane yomuntu yabanye; (I) ukugaxekile, i-phish, i-pharm, i-pretext, isicabucabu, ukukhwabanisa, noma i-scrape; (J) nganoma iyiphi inhloso enhle noma engcolile; Noma (k) ukuphazamisa noma ukuvimbela izici zokuphepha ze-Service noma nanoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene, amanye amawebhusayithi, noma i-Intanethi. Sigcina ilungelo lokuqeda ukusetshenziswa kwakho kweNsizakalo noma iyiphi iwebhusayithi ehlobene ngokuphula noma yikuphi ukusetshenziswa okuvinjelwe.
ISIGABA 13 - ISICELO SAMAGARANTI; UKUPHATHWA KWEZINDLELA
Uvuma ngokucacile ukuthi ukusebenzisa kwakho, noma ukungakwazi ukusebenzisa, isevisi ingozi yakho kuphela. Insizakalo nayo yonke imikhiqizo kanye nezinsizakalo ezinikwe kuwe ngokusebenzisa le nsizakalo (ngaphandle kwalokhu kuchazwe ngokucacile kithi) enikeziwe 'njengoba kunjalo' futhi 'njengoba iyatholakala' ukuze usebenzise, ​​ngaphandle kokumelwa, iziqinisekiso noma izimo zanoma yiluphi uhlobo, ziveza noma Kuchazwe, kufaka phakathi zonke iziqinisekiso ezinemibandela noma izimo zokuthengisa, ikhwalithi edayisa umthengi, ukufaneleka komnqopho othile, ukuhlala, isihloko, nokungabi nokuphula umthetho.
Akekho icala Popular Jewelry, abaqondisi bethu, izikhulu, abasebenzi, izinhlangano, abahlinzeki, abaqashi, abaqeqeshi, abahlinzeki, abahlinzeki bezinsizakalo noma abalayisensisi banecala nganoma yikuphi ukulimala, ukulahlekelwa, ukufaka isicelo, noma yikuphi okuqondile, okungaqondile, okungahle kwenzeke, okujeziswayo, okukhethekile noma okulimazayo kwanoma yiluphi uhlobo , kufaka phakathi, ngaphandle kwemingcele elahlekile, imali elahlekile, imali elahlekile, ukulahlekelwa kwedatha, izindleko zokufaka esikhundleni, noma ukulimala okufanayo, kungakhathaliseki ukuthi kusekelwe enkontileka, ukuhlukumezeka (okufaka ukunganaki), icala eliqinile noma okunye, ngenxa yokusebenzisa kwakho noma yikuphi isevisi noma yimiphi imikhiqizo etholakale isebenzisa isevisi, noma nganoma yisiphi esinye isimangalo esihlobene nganoma iyiphi indlela ekusetshenzisweni kwakho kwensizakalo noma yimuphi umkhiqizo, kufaka phakathi, kodwa kungagciniwe, noma yimaphi amaphutha noma ukushiywa kunoma yikuphi okuqukethwe, noma ukulahlekelwa noma ukulimala kwanoma yikuphi okwenziwe ngomusa ngenxa yokusetshenziswa kwensizakalo noma noma yikuphi okuqukethwe (noma umkhiqizo) okuthunyelwe, okudlulisiwe, noma okwenziwe ngenye indlela nge-service, noma ngabe kunconywe ukuthi kungenzeka. Ngenxa yokuthi abanye bathi noma iziphathimandla azivumeli ukukhipha noma ukukhawulelwa kwecala lokulimala okulandelanayo noma okungahle kwenzeke, kulawo mazwe noma iziphathimandla, inkokhelo yethu iyobekelwe kuphela ekuvunyeni komthetho.
ISIGABA 14 - INDEMNIFICATION
Uyavuma ukubuyisela, ukuvikela nokugcina okungenabungozi Popular Jewelry kanye nomzali wethu, izinsizakalo, abambisene nabo, izikhulu, abaqondisi, abaphathi, izinkontileka, abahlinzeki bamalayisensi, abahlinzeki bezinsizakalo, abathintekayo, abahlinzeki, abaqeqeshi, abaqeqeshi, abaqeqeshi, abaqeqeshi, abaqeqeshi, abaqeqeshi, abaqeqeshi, abaqeqeshi, abaqeqeshi, abaqeqeshi, abaqeqeshi, abaqeqeshi, abaqeqeshi, abaqashi nabasebenzi, ngenxa noma ngenxa yokuphulwa kwakho kwale Migomo Yesevisi noma amadokhumenti afaka ngokubhekisela, noma ukwephulwa kwanoma yimuphi umthetho noma amalungelo omuntu wesithathu.
INGXENYE 15 - UKUPHILA
Uma kwenzeka ukuthi noma yikuphi ukuhlinzekwa kwale Migomo Yesevisi kunqunywe ukuba kungemthetho, kungabikho noma kungenakuqiniswa, lokho kuhlinzekwa kuzobekwa amandla ngokugcwele ngokuvunyelwe ngumthetho osebenzayo, futhi ingxenye engacindezelwayo izobhekwa njengehlukanisiwe kule migomo Isevisi, ukuzimisela okunjalo ngeke kuthinte ukuqinisekiswa nokuqiniswa kwanoma yiziphi ezinye izinhlinzeko ezisele.
ISIGABA 16 - UKUQALA
Le Migomo Yensizakalo iyasebenza ngaphandle kokuthi kuze kube yilapho ipheliswa nguwe noma thina. Ungaqeda le Migomo Yesevisi kunoma yisiphi isikhathi ngokusitshela ukuthi awusasifisi ukusebenzisa iMisebenzi yethu, noma uma ushiya ukusebenzisa isayithi lethu.
Uma usuhluleka ukugwetshwa kuphela, noma sisola ukuthi wehlulekile, ukuhambisana nanoma yiliphi isikhathi noma ukuhlinzekwa kwale Migomo Yesevisi, nathi singase sigcine lesi sivumelwano nganoma isiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso futhi uzohlala ubophekile kuwo wonke amanani afanelekile Kuze kuhlanganise nosuku lokuqedwa; Futhi / noma ngokufanayo kungakuphika ukuthi ufinyelela kwiNkonzo yethu (noma iyiphi ingxenye yayo).
ISIQEPHU 17 - ISIVUMELWANO ESIFUNDWAYO
Ukuhluleka kwethu ukusebenzisa noma ukuphoqelela noma yikuphi ilungelo noma ukuhlinzekwa kwale Migomo Yesevisi ngeke kube yilapho kukhishwa khona ilungelo noma ukuhlinzekwa.
Le Migomo Yesevisi nanoma yiziphi izinqubomgomo noma imithetho yokusebenza ethunyelwe nguwe kule sayithi noma ngokuqondene ne-Service isebenza sonke isivumelwano nokuqonda phakathi kwakho nathi futhi ulawula ukusetshenziswa kwakho kweNsizakalo, ukubeka phambili noma yiziphi izivumelwano zangaphambili noma ezifanayo, ukuxhumana kanye neziphakamiso , Kungaba ngomlomo noma ebhaliwe, phakathi kwakho nathi (kubandakanya, kodwa kungagciniwe, noma yiziphi izinguqulo zangaphambili zeMigomo Yesevisi).
Noma yikuphi ukungaqondakali ekuchazeni le Migomo Yesevisi ngeke kuthethwe ngokumelene neqembu lokubhalisa.
ISIGABA 18 - UMTHETHO OTHANDAYO
Le migomo yesevisi kanye nanoma yiziphi izivumelwano ezihlukile lapho sikunikeza khona Izinsizakalo zizolawulwa futhi zithathwe ngokuya ngemithetho ye-255 Canal Street New York New York US 10013.
ISIQEPHU 19 - IZINGQUBO ZOKUSEBENZISWA KWENKONZO
Ungabuyekeza inguqulo yamanje kakhulu yeMigomo Yesevisi noma kunini kuleli khasi.
Sigcina ilungelo, ngokuqonda kwethu kuphela, ukuvuselela, ukushintsha noma ukushintsha noma iyiphi ingxenye yale Migomo Yesevisi ngokuthumela izibuyekezo kanye nezinguquko kuwebhusayithi yethu. Kungumthwalo wakho ukuhlola iwebhusayithi yethu ngezikhathi ezithile ukuze kwenziwe izinguquko. Ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo noma ukufinyelela kwiwebsite yethu noma isevisi emva kokuthunyelwa kwanoma yiziphi izinguquko kule Migomo Yesevisi kubandakanya ukwamukelwa kwalezo zinguquko.
ISIGABA 20 - ULWAZI OLWAZI
Imibuzo mayelana neMigomo Yensiza kufanele ithunyelwe kithi ku info@popular.jew jewelry